The Ab Presents Nepal » संसद र पार्टी दुवैतिर ओलीको बहुमत आए पछि प्रचण्डको प्रधानमन्त्री अन्ने जुक्त्ति फेल खाएको छ !
संसद र पार्टी दुवैतिर ओलीको बहुमत आए पछि प्रचण्डको प्रधानमन्त्री अन्ने जुक्त्ति फेल खाएको छ !
काठमाडौं- : सिंगो मुलुकले संकट सामना गरिरहेका बेला पार्टीभित्रैबाट आफूमाथि प्रहार हुन थालेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद र पार्टी दुवैतिर आफ्नो बहुमत जुटाउने प्रयास गरेका छन्।यही क्रममा ओलीले तत्कालीन एमाले र माओवादी दुवै पक्षका सांसदहरुसँगको भेट तथा छलफललाई तीव्रता दिएका छन्। आवश्यक परे बहुमतको दस्तावेज देखाउने गरी सांसदको हस्ताक्षर समेत गराइएको छ। बुधबार बिहानसम्‍म प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका ६० भन्दा बढी सांसदहरुले हस्ताक्षर गरिसकेका छन्।
ओलीले बुधबार साँझ ५ बजेको सचिवालय बैठकमा आफ्नो पक्षमा बहुमत देखाउन सांसादलाई हस्ताक्षर गराउन सुरु गरेको स्रोतको दाबी छ । आन्तरिक विवाद र पछिल्लो घटनाक्रमको विषयमा छलफलका लागि साँझ ५ बजे सचिवालय बैठक बोलाइएको छ। स्रोतका अनुसार सचिवालय बैठकमा ओलीले आफूसँग बहुमतको साथ रहेको बताउँदै सहयोगका लागि आग्रह गर्नेछन्। अध्यक्ष र प्रधानमन्‍त्री कुनै पनि पद छोड्न ओली तयार नरहेको स्रोतको दाबी छ।
ओलीले मिलेर अघि बढ्ने प्रस्तावसहित प्रचण्ड र माधव नेपाल दुवै समूहलाई फकाउने प्रयास गरेका थिए। त्यसका लागि उनले नेपाल र प्रचणडसँग भेटेर पटकपटक छलफल पनि गरेका थिए। तर त्यो पहल सफल नभएपछि सांसदको हस्ताक्षर जुटाएर बहुमत देखाउने तयारीमा ओली छन्। बालुवाटार निकट स्रोतले भन्यो, ‘बाहिर हल्ला गरियोजस्तो अल्पमतको अवस्था होइन। पार्टी र संसद दुवैतिर स्पस्ट बहुमत छ। त्यो आवश्यक परे दस्तावेजसहित पेस हुनसक्छ।’
ओलीको विकल्प खोज्‍न अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतम समूह एकै ठाउँमा उभिएपछि यो समिकरणलाई जसरी नै भत्काउने प्रयासमा बालुवाटार जुटेको छ।स्थायी समितिको बैठक बोलाउन र त्यसमै ओलीको विकल्पबारे छलफल गर्न प्रचण्ड, माधव, झलनाथ र गौतम समूह सक्रिय भएपछि ओली पक्ष स्थायी समितिलाई जसरी पनि टार्ने रणनीतिमा छ। न्प्रचण्ड र नेपाल समूहका २० सदस्यले यही वैशाख १० मा दुवै अध्यक्षलाई पत्र लेखेर स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन माग गरेका थिए।